Burmese Poetry Foundation: November 2009
ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ကိုသန်းဌေးက သည် “နေရောင်ခြည်နဲ့တွေ့ဆုံခြင်း” ကဗျာရှည်ကို ထုတ်ဝေဖို့ပြောလာ သည့် အခါ သည်ကဗျာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြောဖို့ အနည်းငယ်ရှိလာပါသည်။ ဤကဗျာသည် တစ်ကြိမ်တခါမျှ ပုံနှိပ်ဖော်ပြ ခြင်းမပြုရသေးသည့် ကဗျာအသစ်တစ်ပုဒ်ဖြစ်ပါသည်။
သို့ရာတွင် ပုံနှိပ်ဖော်ပြမှုသမိုင်းအရ ကဗျာအသစ်တစ်ပုဒ်ပင် ဖြစ်သော်လည်း ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေ ကဗျာဆရာ အချို့နဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကဗျာဆရာများ၊ ကဗျာချစ်သူအတော်များများအဖို့ ကဗျာအဟောင်းတစ်ပုဒ်သာဖြစ်ပါသည်။
ဤကဗျာရှည်ကို လွန်ခဲ့သည့် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကလအတွင်း နှစ်များက ရေးသားခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ခုနှစ်က လက်ရေးစာ အုပ်ငယ်အဖြစ် မိတ်ဆွေအတော်များများ ဖတ်ရှုပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အဖို့ အမှတ်တမဲ့ပင်ဖြစ်သော်လည်း မိတ်ဆွေ တချို့နဲ့ မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ကဗျာဆရာများက လူကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေ၊ စာရေး၍ဖြစ်စေ ဤကဗျာစာအုပ်ငယ်ကို ရလို ကြောင်း မကြာခဏ တောင်းဆိုတတ်ကြပါသည်။
ကိုယ်ရေးသည့်စာများကို စနစ်တကျ သိမ်းဆည်းမထားတတ်သော ကျွန်တော့်အဖို့ ထိုမိတ်ဆွေများ၏အလိုဆန္ဒ ကို ဖြည့်ဆည်းဖို့ထက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တခါတရံ ပြန်ဖတ်ချင်စိတ်ရှိ၍ ဖတ်စရာစာအုပ်မရှိဖြစ်ခဲ့ရပါသည်။ ၁၉၉၀ပြည့် နှစ်၊ ဇူလိုင်လက မဟေသီမဂ္ဂဇင်းတွင် ကိုဟိန်းလတ်နှင့် ရုပ်ရှင်တေးကဗျာမဂ္ဂဇင်းတွင် မာဆိုးတို့က အင်တာဗျူးလုပ်ဖြစ် သောအခါ ထိုစာအုပ်ငယ်ကို မဖြစ်မနေ ရှာရမည့် အခြေအနေ၌ တက္ကသိုလ်မှ မြန်မာစာနည်းပြ မိတ်ဆွေအမျိုးသမီး စာရေး ဆရာမတစ်ဦးထံမှ ရရှိပါသည်။ ထိုစာအုပ်ကိုလည်း အင်တာဗျူးကိစ္စပြီးလျှင် ဆက်ဆက်ပြန်ပေးရန်ကတိဖြင့် ငှားယူခဲ့သော် လည်း ရန်ကုန်မှ မိတ်ဆွေကဗျာဆရာတစ်ဦးက အတင်းအကြပ်ယူဆောင်သွားသည့်အတွက် ပိုင်ရှင်ထံပြန်ပေးဖို့ ကတိ ပျက်ခဲ့ရပါသည်။
ယခုကျွန်တော့်မိတ်ဆွေနှင့် ဤကဗျာရှည်ကိုထုတ်ဝေဖို့ ကြုံလာသည့်အခါ ညီငယ်ကဗျာဆရာသွယ်အောင် ကူး ယူထားသော လက်ရေးမူရရှိ၍ အဆင်ပြေသွားပါသည်။ ဤနေရာမှပင် ညီငယ်ကဗျာဆရာသွယ်အောင်အား ကျေးဇူးတင် ကြောင်း စကားဆိုခဲ့ပါမည်။
ဤကဗျာရှည်နှင့်ပတ်သတ်၍ နောက်တစ်ချက်ပြောရန်ရှိသည်မှာ ကျွန်တော့်ကလောင်အမည်ကိစ္စဖြစ်ပါသည်။ ထိုစာအုပ်ငယ်၌ ကျွန်တော့်ကလောင်အမည်မှာ နေမင်းပိုင်စိုးဖြစ်ပါသည်။ ထိုကလောင် အမည်ဖြင့်ပင် ပိုင်သနှင့်တွဲပြီး “အီကွေတာအော်သံ” အမည်ဖြင့် အလားတူကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ် သည့်မတိုင်ခင်နှစ်(၁၉၇၇)က ရေးသားခဲ့ကြပါသည်။ ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတော်တော်များများက ကျွန်တော့်အား ယခုပိုင်စိုးဝေထက် နေမင်းပိုင်စိုးကို ပို၍ အသိအမှတ်ပြုလိုသူ များပင် ရှိပါသည်။
၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်ကာလများ ရောက်လာသည့်အခါမှာတော့ ကျွန်တော့်အယူအဆများ ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါသည်။ ရေးဖော်ရေးဖက်မိတ်ဆွေများ၏ မဂ္ဂဇင်းများအပေါ် အတူလက်တွဲလှုပ်ရှားရေး ဆွဲဆောင်မှုကြောင့်လည်းကောင်း ဘာထရန် ရပ်ဆဲ စသော လူမှုပြုပြင်ရေး ဒဿနဆရာများ၏ စာပေကြောင့်လည်းကောင်း မလိုလားအပ်သော တင်းမာမှုများကို လက်ကိုင်ပြုပြီး ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရောက်လိုသည့် ပန်းတိုင်ကို မရောက်နိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြင့် ၁၉၈၂-၁၉၈၃ ကာလများဆီမှစပြီး မဂ္ဂဇင်းများတွင် ပါဝင်ရေးသားဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပါသည်။
ဤကဗျာရှည်နှင့်ပတ်သတ်ပြီးပြောရန် နောက်တစ်ချက်ရှိပါသေးသည်။ ဆိုခဲ့သည့်အတိုင်း ဤကဗျာရှည်သည် မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများအတွက် ရည်ရွယ်၍ ရေးသားခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်သည့်အလျောက် ဤကဗျာရှည်တွင် ပါဝင် သည့်စကားလုံးများ၊ အတွေးအမြင် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည် မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများပေါ်၊ သို့မဟုတ် ပုံနှိပ်စာလုံးအဖြစ် ဘယ်သောအခါမျှ ရောက်လိမ့်မည်ဟု မထင်ခဲ့ပါ။ မထင်သည့်အလျောက် ဤကဗျာရှည်ထဲမှ စကားလုံးတချို့တလေနှင့် စိတ်ကူးစိတ်သန်းများသည် နောင်အခါ (ယခုနှစ်ပိုင်းများ)၌ မဂ္ဂဇင်းစာမျက်နှာများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးရေးသည့် ၀တ္ထု၊ ကဗျာများတွင် အသုံးပြုမိခဲပါသည်။
ဥပမာ “ဟောသည်ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ နာမကျန်းမှုတွေကို ဆေးဝါးကုသဖို့အတွက် ကျွန်တော် ကဗျာဆရာလုပ်ရ မယ်အမေ” စသည့်စာပိုဒ်အချို့ကို “အမေ့အတွက် ကက်တလောက်စာအုပ်သစ်” ၀တ္ထုတို၌လည်းကောင်း၊ “သိန်းစွန်ငှက် အပြန်လမ်း” ကဗျာရှည်တွင်လည်းကောင်း အသုံးပြုခဲ့မိပါသည်။ ဤသို့ထပ်ခြင်းအတွက် စာဖတ်သူများအားတောင်းပန်ရန် ကျွန်တော့်ဘက်က တာဝန်ရှိပါသည်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် ပြန်လည်ခိုးယူမိခြင်းဖြစ်ကြောင်း ၀န်ခံစကားဆိုပါသည်။
ခိုးယူခြင်းဟူသည့်စကားစပ်အရ ပြောဖို့တစ်ခုရှိလာရပြန်ပါသည်။ ဤကဗျာရှည်မှ စကားလုံးတော်တော်များများ နှင့် စာပိုဒ်အချို့ကို သီချင်းရေးသူတချို့နဲ့ ကဗျာဆရာတချို့ သူတို့၏သီချင်းများ၊ ကဗျာများတွင် ကူးယူအသုံးပြုထား ကြောင်း ကျွန်တော်သိပါသည်။ ကျွန်တော့်အား ခွင့်တောင်းခြင်း၊ အသိပေးခြင်း၊ ၀န်ခံခြင်းမပြုပါ။ ကျွန်တော့်ဘက်က တစ်စုံ တစ်ရာ တရားစွဲဆိုခြင်း၊ တန်ရာတန်ဖိုးတောင်းခံခြင်း စသည် မပြုလုပ်ခဲပါ။ ခွင့်လွှတ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးပြီးသားကိစ္စကို ခွင့်လွှတ် ခဲ့သော်လည်း နောက်ထပ်တစ်ဖန် ထိုသို့မပြုလုပ်ရန် တောင်းပန်စကားဆိုပါသည်။
နိဂုံး။ အနှစ်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်ကာလမှ ကျွန်တော့်အတ္တရဲ့ရုပ်ပုံလွှာတစ်ခုသာဖြစ်ပါသည်။ သည်အချိန် သည်အခါရဲ့ ခံစားမှုများနှင့် အံချော်နေပြီဟုဆိုပါလျှင် ကျွန်တော့်အားခွင့်လွှတ်ပြီး ထုတ်ဝေလိုသူ ကျွန်တော့်မိတ်ဆွေကိုသာ အပြစ် တင်ကြပါ။
၂၆၊ ၁၂၊ ၉၂
ဟောဒီကမ္ဘာကြီးရဲ့ နာမကျန်းမှုတွေကို ဆေးဝါးကုသဖို့အတွက် ကျွန်တော်ကဗျာဆရာလုပ်ရမယ်။ အရာအားလုံး ကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ ကဗျာဆရာလုပ်ရမယ်အမေလို့ ကျွန်တော်ပြောဆိုတဲ့အချိန်မှာ အမေ့မျက်နှာပေါ်က မျက်ရည်စတွေ တလိမ့်လိမ့်စီးဆင်းကျလာပါတယ်။
အမေ့မျက်ရည်တွေ ခန်းခြောက်သွားစေဖို့ စကားတစ်စုံတစ်ရာ ပြောလိုပေမယ့် ရှာမရခဲ့ပါဘူး။ ဒီလိုနဲ့ အမေရဲ့ မွေးကျေးဇူးကို မဆပ်နိုင်တဲ့သားတစ်ယောက်အဖြစ် ကမ္ဘာထဲမှာ ပူလောင်စွာ စီးဆင်းခဲ့ပါတယ်။
ခေတ်ပေါ်ကဗျာဟာ အရေပြားပေါ်မှာတည်ရှိနေတဲ့ လှပမှုတွေကို ကျောခိုင်းပြီး ဘ၀ရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံး အတ္တတရား ကို ရှာဖွေတူးဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကဗျာဆရာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတဲ့ ၀ိညာဉ်တွေဟာ အာရုံတရား တွေနဲ့ သာမန်ထိတွေ့မှုပေါ်မှာ ကဗျာဖွဲ့လိုမရနိုင်ပါဘူး။ ထိတွေ့ခံစားမှုကို အခြေခံတဲ့ ကဗျာဆရာရဲ့ဒဿနဟာ ကဗျာ တစ်ပုဒ်ရဲ့ အသွေးအသားပါပဲ။
ကျွန်တော်တို့ဟာ နေမင်းပိုင်စိုးရဲ့ ရိုးသားမှုနဲ့ နေမင်းပိုင်စိုးရဲ့ အတ္တတရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ်။
မှားယွင်းမှုများစွာနဲ့ ငါလူဖြစ်ခဲ့ပါသလား။ ရူးသွပ်မိုက်မဲစွာ ကဗျာဆရာအဖြစ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ပါသလား။
လို့ ငါ့ကိုယ်ငါ ငြင်းဆိုခဲ့တဲ့အချိန်မှာ ဒဏ်ရာ အနာတရတွေနဲ့ ဟောဒီကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ ငိုကြွေးသံတွေ တိတ်ဆိတ်သွားပါတယ်။
လို့ ငါထပ်ပြီးရွတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ အမှန်တရားတွေ ငိုကြွေးကုန်ကြပြီ။
ထင်ရှားကျော်ကြားမှုနဲ့ ပုံနှိပ်စာလုံးအဖြစ် ဖော်ပြခံရမှုကို ဦးတည်ပြီး ကဗျာကို သေးသိမ်စွာတွက်ချက်နေသူတွေ ကိုတော့ ကျွန်တော်တို့က ရယ်မောပစ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကဗျာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဟာ ဒီ့ထက်ပိုမို ကျယ်ဝန်းခဲ့ပါပြီ။ ဘ၀ရဲ့ဝေဒနာ ကို အနက်ရှိုင်းဆုံးဟု ဖော်ပြနိုင်တဲ့ ကဗျာဆရာသာ သမိုင်းရဲ့စာမျက်နှာပေါ်မှာ လှပစွာ ကျန်ရှိပေလိမ့်မယ်။
ဒီအကြောင်းကို ပြောဆိုဆွေးနွေးကြတဲ့အခါတိုင်းမှာ နေမင်းပိုင်စိုးဟာ ကျွန်တော်တို့အတွက် ပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ ပါတယ်။
ကျွန်တော့်အတ္တနဲ့ ထုလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ငယ်လေးပါ။ အမေ့ မွေးကျေးဇူးကိုမဆပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ်စား . . . ကမ္ဘာမြေကြီးက အမေ့ကို ဦးညွှတ်အလေးပြုတော့မယ်။
၂၊ ၅၊ ၁၉၇၈
ဟိုး… … အဝေးကြီးရယ်မောသံတွေ
အိုကွယ်. . .မိန်းကလေးရဲ့
နွမ်းလျ၊ ပင်ပန်း၊ ရီဝေစွာ
ကြည်နှုး၊ ချိုမြ၊ ရင်ခုန်စွာ . . .။
နင်၊ သင်ခန်းစာထဲ အိပ်ငိုက်သူ
မုန့်တီစား၊ ရုပ်ရှင်သွား၊ ပုတီးစိတ်
လက်ထပ်စာချုပ်ကို တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် အတည်ပြုရသူ။
အိုကွယ် . . . ထားခဲ့တော့
မျှော်လင့်ခြင်းရဲ့ ကမ်းပါးစွန်းပေါ်မှာ. . .
ငါ ငို ပါ သည်
တောကျီးကန်းများ အော်မြည်နေကြစဉ်. . .
ပစ္စုပ္ပန်မှာတော့ . . .
ငါ ရယ်တောင် ရယ်လိုက်ချင်မိရဲ့
ဒီလိုနှင့်ပင် “ အလွမ်းကိုမခံစားတတ်တဲ့
အိုကွယ် . . .ညနေခင်းကလေးရဲ့
ငါ့အတ္တကို ခွဲစိတ်နေကြရာ . . .
ဘ၀၊ အို . . . နောက်ဆုံးစက္ကန့်ပေါ်မှာ
ဒါပေမယ့် . . . အမေ
ငါ . . . ၀မ်းနည်းစွာ ငြင်းဆိုလိုက်ရပြီ။
ဒီလိုနဲ့ပင် . . . တစ်စတစ်စပွန်းပဲ့
အိုကွယ် . . . မိန်းကလေးရဲ့
ငါ၊ ထာဝရကဗျာဆရာသာ ဖြစ်တော့တယ်။
ငါ့ခန္ဓာ ကြီးလိုက်၊ သေးလိုက်၊ ဝေးသွားလိုက်
အရူးတစ်ယောက်လို အော်ဟစ်ရယ်မောပစ်ခဲ့ရာ . . .
အရိုးသားဆုံး အပြုံးတစ်ခုကို ပိုင်ဆိုင်ဆဲပါ။
အိုကွယ် . . .မိန်းကလေးရဲ့
တို့ . . . ထာဝရလွမ်းကြရအောင်နော်။
ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ ကောက်ကြောင်းများစွာ ဆွေးမြည့်ကာမှ
မျက်ရည်တွေနဲ့ ငါ ဖြတ်သန်းခဲ့ပြီ။
ပွန်းပဲ့ခဲ့သော သမာဓိတရားများစွာ . . .
တ၀ီဝီအော်မြည်နေခဲ့ခြင်း မွန်းကြပ်မှုထဲမှာ . . .
ခဏငယ်များစွာ ဖြတ်သန်းနေကြစဉ် . . .
ငါ့မျက်နှာပေါ် တဖြည်းဖြည်း နီးကပ်လာပေါ့။
ဟေး … … …
… … … အသက်ရှူခြင်းကို ရပ်လိုက်ကြ
ဟိုး . . .အနောက်တောင်ဆီက
အို . . .
တဖြည်းဖြည်း ငါ အိုမင်းခဲ့ရ။
နေမင်းပိုင်စိုး မဖြစ်နိုင်တဲ့လူတွေပေါ့။ ။